Olona matin’ny pesta ao Toamasina : nofongarin’ny havany ilay razana efa nalevina | NewsMada
Olona matin’ny pesta ao Toamasina : nofongarin’ny havany ilay razana efa nalevina
Mitera-doza ho an’ny mponin’i Toamasina iray manontolo ny tranga tahaka izao. Tsy nanaiky ny fepetra manokana momba ny fandevenana olona matin’ny pesta ny fianakaviany ka nahavita namongatra ny razana. Tokony ho hentitra ny tomponandraikitra manoloana ny fihetsika nasehoan’ny olona minia mandika ny lalàna, ka mampidi-doza ny mpiara-belona aminy.
Noporofoin’ny mpitsabo nandray an-tanana ny marary tao amin’ny hopitaly fa matin’ny pesta ny raim-pianankaviana 52 taona, Jerome Etienne, ny alarobia 27 septambra lasa teo. Efa nisehoana sakoroka tao amin’ny hopitaly taorian’ny nahafaty ity raim-pianakaviana satria nizizo tsy maintsy haka ny razana ireo fianakaviany. Nisy mihitsy ny fanelanelanan’ny mpitandro filaminana vao nisitaka ireto farany. Nalevin’ny fitondram-panjakana tao Manangareza ny razana ary natrehin’ny tomponandraikitry ny sampandraharahan’ny fahasalamana eto an-toerana.
Tsy niandry ela, nisy naka an-keriny ny alahady 1oktobra lasa teo ilay razana matin’ny pesta tao amin’ny fasana kaominaly Manangareza. Nisy ny firaisana tsikombakomba tamin’ny mpiasan’ny kaominina mpiandry ny fasana. Nomena vola be ny tenany hamela malalaka ireo olona tonga haka ny razana raha ny loharanom-baovao. Niezaka kosa ny teo anivon’ny fitondram-panjakana notarihin’ny préfet-n’ i Toamasina, Benadrasana Cyril sy ny médecin Inspecteur, Toamasina II , Bezandry Desiré (izay efa sitrana raha voan’ny pesta ihany koa) ary ny zandary nanao ny fikarohana hamantarana ny toerana nitondrana ilay razana matin’ny
Niandrasana dimy alina ilay razana misy pesta
Voalaza fa noentin’ ireo fianakaviany nalevina tao amin’ny fasan-drazany tao Ampandriamborona, fokontany Antsirakimatatra, kaominina Amboditandrohoro, disitrikan’ i Toamasina II ny razana. Noentina amin’ny lakana mandeha maotera mandritra ny iray andro manaraka ny lakandranon’ i Pangalanina iny ny razana. Notanterahina ny alakamisy hariva lasa teo ny fandevenana. Araka izany, nisy fiandrasam-paty nandritra ny dimy andro be izao, tsy ho voatanisa eto intsony izay mety ho isan’ny olona mpiandry faty sy nikirakira ny razana mivantana sy izay nisy fifampikasohana tamin’ ireo nikirakira izany razana matin’ny pesta izany.
Noho izay, nanofa vedety haingam-pandeha sy nandefa zandary sy mpiasan’ny fahasalamana ny prefektioran’ i Toamasina nitondra ireo fianakaviana 27 monina eto Toamasina nanantanteraka ny fandevenana tany ambanivohitra. Nozaraina fanafody avokoa izy ireo ny alin’ny zoma teo raha vao tonga teo “port Fluvial”.
Misy sahady ny marary mafy
Ny asabotsy maraina teo, efa nisy sahady marary mafy tsy nahatsiaro tena noentina tetsy amin’ny Hopitalibe. 121 kosa nandalo nanao fitiliana ka ny 107 naiditra hopitaly marary. Ny 14 kosa navoaka ny hopitaly ny asabotsy teo ihany, mbola tsy niampy kosa ny maty.
Efa tsy mahazaka ny marary ny efitrano ka nampiana tranolay eo amin’ny tokontanin’ny hopitaly. Misedra olana koa amin’ny rano fisotro ny marary sy ny mpikarakara marary. Tsy misy afa-tsy paompy iray ao an-toerana ho an’ny rehetra.
Andrasana ny fanapahan-kevitra raisin’ny mpitandro filaminana momba ny famongarana ny razana matin’ny pesta. Nilaza ny “médecin inspecteur” ao Toamasina II fa tsaboina aloha ireo olona ireo sy izay nifanerasera tamin’ izy ireo vao hampiharina aminy ny lalàna. “Raha izy misy tsimokaretina izao no ampidirana am-ponja, vao mainka loza amin’atambo”, hoy hatrany ny dokotera Bezandry Desiré. Ankilany, ny mpitandro filaminana rahateo matahotra ny hanao famotorana ireto olona 27 voampanga ho namaky fasana ireto
Miitatra any avaratr’ i Toamasina ny pesta
Tonga any Fenoarivo Atsinanana hatrany Maroantsetra amin’ny lalam-pirenena fahadimy ny pesta. Ny harivan’ny alakamisy lasa teo, renim-pianakaviana iray 33 taona mpampianatra ao amin’ny sekoly tsy miankina “Le Nid” ary tovolahy iray 22 taona samy monina ao an-tampon-tanànan’i Fenoarivo Atsinanana no naiditra hopitaly nahina ho voan’ny pesta. Noentina any amin’ny Hopitaliben’i Toamasina ary nahitana soratr’aretina pesta taorian’ny fitiliana. Mitohy ny fitsaboana azy roa ireto hatramin’ izao. Maharitra valo andro ny fitsaboana raha tonga ara-potoana eny amin’ny hopitaly. 64 ny tsindrona tsy maintsy atao isaky ny adiny telo, mandritra ny valo andro, ankoatra ny fihinanana pilina sy tsy fahazoana miserasera amin’ny hafa.